Gen 47 | Shona | STEP | Zvino Josefa akaenda, akandoudza Farao, akati, "Baba vangu navana vababa vangu vasvika, vachibva kunyika yeKenani, vane makwai avo, nemombe dzavo, nezvose zvavanazvo; zvino, tarirai vari munyika yeGosheni."
Jakobho anokwazisana naFarao
1 Zvino Josefa akaenda, akandoudza Farao, akati, "Baba vangu navana vababa vangu vasvika, vachibva kunyika yeKenani, vane makwai avo, nemombe dzavo, nezvose zvavanazvo; zvino, tarirai vari munyika yeGosheni." 2Akatora varume vashanu kuvana vababa vake, akavaisa pamberi paFarao. 3Farao akati kuvakoma vake, "Basa renyu nde­reiko?"
Vakati kuna Farao, "Varanda venyu vafudzi, isu namadzibaba edu tose." 4Vakati kuna Farao, "Tauya kuzogara tiri vatorwa munyika ino; nokuti hakuna mafuro amakwai avaranda venyu, nokuti kune nzara kunyika yeKenani; zvino tinokumbira kuti varanda venyu vagare munyika yeGosheni." 5Ipapo Farao aka­taura naJosefa, akati, "Baba vako navana vababa vako vauya kwauri; 6nyika yeIji­piti iri pamberi pako; baba vako navana vababa vako ngavagare panzvimbo ya­kaisvonaka panyika ino, ngavagare pa­nyika yeGosheni; kana uchiziva kuti pakati pavo pana varume vakangwara, uvaite vatariri vemombe dzangu."
7Josefa akapinda naJakobho, baba vake, akavaisa pamberi paFarao; Jakobho akaropafadza Farao. 8Farao akati kuna Jakobho, "Manganiko mazuva amakore oupenyu hwenyu?"
9Jakobho akati kuna Farao, "Mazuva amakore outorwa hwangu makore ane zana namakumi matatu; mazuva amakore oupenyu hwangu akanga ari mashoma hawo, akaipa, haana kusvikira pamazuva amakore oupenyu hwamadzibaba angu pamazuva outorwa hwavo." 10Jakobho akaropafadza Farao, akabuda pamberi paFarao. 11Zvino Josefa akapa baba vake navana vababa vake pokugara, akavapa nzvimbo panyika yeIjipiti, kuti ive yavo, pakaisvonaka panyika iyo, panyika yeRa­mesesi, sezvaakarairwa naFarao. 12Josefa akachengeta baba vake, navana vababa vake, navose veimba yababa vake, aka­vapa zvokudya achiverenga navana va­vowo.
Josefa anotengera Farao nyika yose nezvokudya
13Zvino pakanga pasina zvokudya panyika yose, nokuti nzara yakanga iri huru, nyika yeIjipiti nenyika yeKenani dzikaziya nenzara. 14Josefa akaunganidza mari yose yakanga iri panyika yeIjipiti, napanyika yeKenani, yavakatenga zviyo nayo, Josefa akaisa mari iyo mumba maFarao. 15Mari yose yakati yapera mu­nyika yeljipiti, napanyika yeKenani, vaIjipiti vose vakauya kuna Josefa, vakati, "Tipei zvokudya, nokuti tingafa seiko pamberi penyu? Nokuti mari yapera."
16Josefa akati, "Uyai nemombe dze­nyu, ndikupei zvokudya pamusoro pezvi­pfuwo zvenyu, kana mari yapera." 17Zvino vakauya kuna Josefa nezvipfuwo zvavo; Josefa akavapa zvokudya, vachi­tsinhanha namabhiza, namakwai, nemo­mbe, nembongoro; akavararamisa nezvo­kudya, vachitsinhanha nezvipfuwo zvavo zvose gore iroro.
18Gore iroro rakati rapera, vakauya kwaari negore rechipiri, vakati kwaari, "Hatingavanziri ishe wedu kuti mari yedu yose yapera, mapoka ezvipfuwo ava ashe wedu; hakuchina chakasara pamberi pashe wedu, asi miviri yedu neminda yedu; 19zvino tingafa seiko pamberi pe­nyu, isu nenyika yedu? Titengei henyu, isu nenyika yedu, tive varanda vaFarao; tipeiwo mbeu tirarame tirege kufa, nenyika irege kushanduka iite sango.'
20Zvino Josefa akatengera Farao nyika yose yeIjipiti, nokuti vaIjipiti vaka­tengesa mumwe nomumwe munda wake, nokuti nzara yakanga iri huru pamusoro pavo, nyika ikava yaFarao. 21Kana vari vanhu akavatamisa kumaguta, kubva ku­muganhu mumwe weIjipiti kusvikira kuno mumwe muganhu wayo. 22Asi nyika yavapirisiti yoga haana kuitenga, nokuti vapirisiti vakanga vaganhurirwa mugove wavo naFarao; vaidya mugove wavo wavaipiwa naFarao. Naizvozvo havana kutengesa nyika yavo: 23Zvino Josefa akati kuvanhu, "Tarirai, ndakate­ngera Farao imwi nenyika yenyu nhasi, hedzi mbeu, mudyare panyika. 24Ne­nguva yokukohwa munofanira kupa Fa­rao cheshanu, zvina zvichava zvenyu, zvive mbeu dzeminda, nezvokudya zve­nyu, nezvavari mudzimba dzenyu, nezvo­kudya zvepwere dzenyu."
25Ivo vakati, "Ndimwi makatiche­ngeta; ngatiwane hedu nyasha panashe wedu, tive varanda vaFarao." 26Josefa akatema mutemo panyika yeIjipiti, uripo nanhasi, kuti Farao apiwe cheshanu; asi nyika yavapirisiti yoga haina kuva yaFa­rao. 27Zvino vaIsiraeri vakagara panyika yeIjipiti, panyika yeGosheni, vakazviwa­nira fuma imomo, vakabereka vana, vakawanda kwazvo.
Mazuva okupedzisira aJakobho
28Jakobho akagara panyika yeljipiti makore ane gumi namanomwe; naizvo­zvo mazuva aJakobho makore oupenyu hwake, akanga ari makore ane zana namakumi mana namanomwe. 29Zvino nguva yokufa kwaIsiraeri yakanga ya­swedera, iye akadana mwanakomana wake Josefa, akati kwaari, "Kana nda­wana nyasha kwauri, chiisa hako ruoko rwako pasi pechidya changu, undiitire ngoni nezvokwadi; rega hako kundiviga paIjipiti; 30asi kana ndavata namadzibaba angu, undibvise paIjipiti, unondiviga mu­hwiro hwavo." Iye akati, "Ndichaita sezvamataura. "
31Vakati, "Ndipikire;" iye akavapi­kira. Ipapo Isiraeri akakotamira pamu­soro wouvato hwake.